Ngabe utshala imali ezintweni zokuphromotha? | Martech Zone
NgoLwesine, Septhemba 20, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngempelasonto edlule ngimenywe yiqembu ku Amasu Esiza ukuba phezu kwabo I-Edge yombukiso womsakazo weWebhu nokukhuluma nabanye babafundi beNew Media Communication abeza bevela e-IU Kokomo bezokhuluma nathi. Bekungumcimbi omnandi futhi abafundi bebenomdlandla futhi bebuza imibuzo eminingi - hhayi ngemidiya emisha nje kuphela kodwa nangebhizinisi lilonke. Kwakukhuthaza ngendlela emangalisayo ukubona ukuthi babevele benothando kangakanani.
Uma ngiya kule micimbi, ngihlala ngizama ukuletha uhlobo oluthile lwezinto zokuphromotha. Ngalesi sikhathi ngilethe amadrayivu we-4Gb USB ukuthi Highbridge ayenziwe ngu Ama-ePromos.
Ama-USB drive asetshenziswayo ashaywa ngokushesha futhi ngemuva kokuthi abafundi abambalwa bewabonile, ngaba nesixuku sabafundi esasingizungezile. Abantu bathanda izinto zokwenyusa… ikakhulukazi uma zilusizo. Njenganoma yikuphi ukumaketha, kunemali enhle esetshenzisiwe nemali emibi esetshenzisiwe, noma kunjalo. Ukushayela kwe-USB akubizi kangako, ikakhulukazi uma kuyi-4Gb :). Kodwa-ke, ngokunikela ngento ethile yokuphromotha ebalulekile, kunikeza umqondo wekhwalithi nokwehlukanisa esingathanda ukuthi abantu bazihlanganise nenkampani yethu.
Ungadluli ezintweni zokukhangisa. Kungaba yisiginali kumathemba akho ukuthi uwuhlobo lomthengisi oluzodlula kubo!
Mayelana ne-ePromos: Ngi-ode kabusha kusuka ku- Ama-ePromos Izikhathi ezimbalwa manje futhi ngiyazisa kakhulu insizakalo yabo neminikelo yabo. Ukushayela kwakuphrintiwe kahle, kwavela ngesikhathi futhi kwahlanganiswa kahle, futhi babenezaphulelo ze-oda elinamandla kakhulu. Okunye engikuthokozelayo nge-ePromos ukuthi bathumela ama-imeyili ethu athi “Isikhathi Soku-oda kabusha” cishe inyanga ngemuva koku-oda into enesaphulelo soku-oda kabusha. Kuyisikhumbuzo esihle sokuhlola ukunikezwa kwakho kwezinto zokuphromotha bese u-oda kabusha uma kunesidingo!
Tags: ama-epromosizinto zokwenyusa umcimbiUkukhuthazwaizinto zokukhangisazukiswausb ushayela
Jan 24, 2014 ku-2: 09 AM
Izipho ezixhasiwe zizokwakha umhlaba ohlukile wokuthengisa njengoba amakhasimende azigcinela isikhathi sakho esingeziwe kunokuba uzilahle noma uzibe njengezinye izikhangiso.